Semalt Sagt Ny fahadisoanao amin'ny SMM avoakany
Ny mpanjifa amin'ny taona 2017 dia miandry fa ny orinasa misahana ny orinasa dia miara-miasa matetika amin'ny tambajotra sosialy. Maro ny E-Commerce-Unternehmen kosa mandinika ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra ara-tsosialy sy ny fampivoarana ny mozika (SEO) amin'ny fananganana sy ny fifandraisana amin'ny mpanjifa.
Jack Miller, izay tompon'andraikitra amin'ny Success Successor von Semalt , dia maneho ireo hevi-diso telo lehibe izay mampiroborobo ny orinasa amin'ny fampandehanana ny media sosialy-marketing campaigns - vichy aqualia thermal spa zestaw.
1. Campaign san effective Strategie starten
Tena ilaina ny mamolavola ny Social-Media-Ziele mba hanatsarana ny tetik'asa fampivoarana ara-barotra amin'ny aterineto. Ny Social Media Marketing dia afaka manana ny Ziele. Ny tanjona dia mety ho ny fanatsarana ny marika ahafantarana ny taranja mpanjifa. Ankoatra ny tanjona amin'ny Marketing Social Media dia ny fampiasana ny tambajotra sosialy mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Ny tsara ny tetik'asa sosialy-media dia mampifandray ireo tanjona izay hanatsarana ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny tolotra amin'ny taranja mpanjifa. Ny tetik'ady mahomby dia manana tsara ny tambajotra sosialy.
Ireo orinasa izay miresaka momba ny fomba amam-panao sy ny fomba amam-panao sy ny fomba amam-panao sy ny fomba amam-panao, dia namporisihina hampiasa ny tambajotra sosialy na Instagram. Pinterest dia manana e-commerce, izay mety ahafahan'ireo mpanjifa mampiasa orinasa na serivisy an-tserasera. Ny mpivarotra, ny vokatra vita tanana sy ny fanaovana asa-tanana-tena, dia tokony hampiasa ny YouTube sy ny Facebook platform noho ny fampiasana ny votoatin'ny fampielezam-peo. Tena zava-dehibe ho an'ny orinasa iray ny mampihatra ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy.
Ny fampahalalam-baovao ara-tsosialy amin'ny mailaka dia fomba fiasa mahomby hampiroboroboana tranonkala sosialy ho an'ny mpanjifa. Ny iray amin'ireo SEO-hevitra hafa dia maneho fa ny Social-Media-Links dia tafiditra ao amin'ny tranonkala Business
2. Tsy tokony hihaino sy hihetsika
Ny mpanjifa dia manome ny heviny momba ny vokatra sy ny asa ataon'ny orinasa. Tena zava-dehibe ny fandraisan'andraikitry ny orinasa. Misy fitaovana samihafa izay mety hampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa, z. B. Fanambarana ara-tsosialy sy Hootsuite. Fa ianao kosa dia ao amin'ny fahaiza-manaony voafetra. Tokony hamerina ny fandraisan'anjaran'ireo mpampiasa rehetra ny orinasa.
Facebook dia tamba-tserasera sosialy, izay mety hahatonga ny orinasa hiresaka amin'ny masoivohon'ny taranja mpanjifa. Ny orinasa misahana ny fampiroboroboana ny serivisy sy ny vokatra dia miteraka olana maro. Ny tambajotra sosialy dia manome fahafaham-po ny orinasam-pandraharahana ny mpanjifa mba hampahafantatra ny olana sy ny olana eo amin'ny tetik'asa.
3. Mitohy ny fanandramana
Tena ilaina ny fanandramana amin'ny fanaraha-maso ny asa sosialy. Ny orinasa dia afaka mampiasa fomba vaovao entina hanampiana ny mpanjifa. Live-Video dia asan'ny iray amin'ny Facebook sy Instagram. Manatsara ny echtzeitkommunikation eo amin'ny mpiara-miasa amin'ny orinasa sy ny mpanjifa. Momba ny Live-Video-Funktion dia mety hampahafantatra amin'ny orinasa ny tarika ny vaovao momba ny vaovao.
Ny orinasa dia afaka mampiasa Live Stream ihany koa ho an'ny fampielezam-peo amin'ny Facebook ho an'ny vokatra. Ny Live-Streaming dia manintona ny maro an'isa, satria ny interactivité dia ampiasaina ary ny SEO-teny tena marina ampiasaina. Ny mpampiasa ny Social Media dia manana fahafahana manontany sy manontany ny fanontaniana. Ny Live-Streaming-Sitzung dia ahafahan'ireo orinasa, mba hianaran'ny mpanjifa, indrindra amin'ny fanatsarana ny mpanjifa.
Ny fampiharana ny SEO amin'ny sehatra misy anao dia afaka manatsara ny fampiasana ny Social-Media-Marketing-Bemühungen. Ny SEO-Experts dia afaka mampiasa tenim-pahendrena amin'ny fampiasana ny Social-Posts. Ny mpanjifa dia manintona ny famandrihana amin'ny fampahalalana mahaliana momba ny fahombiazan'ny vokatra na ny asa fanompoana.